Ciidamada Al Shabaab oo dib ula Wareegay Deegaanno Dhaca Duleedka Magaalada Beled Weyne Ee Gobolka Hiiraan.
Sunday August 09, 2015 - 12:06:07 in Wararka by Super Admin
Kadib dagaallo 5 maalmood oo xiiriir ah ka socday wadada xiriirisa magaalooyinka Beled Weyne iyo Buula Burde ayay ciidamada shabaabul Mujaahidiin u suurtagashay in ay dib ula wareegaan inta badan deegaannada wadada laamiga ah ku teedsan.
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha soomaliya dhaca ayaa sheegaya in ciidamada xabashida Itoobiya ay qabsadeen deegaanka Halgan islamarkaan ay dad shacab ah ku laayeen.
Wariye Hiiraan ku sugan ayaa sheegay in xoogaga shabaabul Mujaahidiin ay dib uqabsadeen deegaanada kala ah Garasyaani,Nuur Fanax iyo Baardheere oo dhammaantood duleedka magaalada Beled Weyne dhaca.
Ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa meydad iyo dhaawacyo ka daad gureeyay deegaanka Halgan,ciidamada shabaabul Mujaahidiin ayaa gaaf wareegaya Beled weyne arrinkaasi oo waxba kama jiraan ka dhigaya duullaankii Itoobiyaanka oo ahaa in ay isku furaan Beled weyne iyo Buula Barde.
Wadada laamiga ah ee dhanka Buula Barde ayaa muddo sanad ka badan xiran iyadoona ciidamada Jabuuti ay xaalad go’doon ah ku jiraan waxaana ku adkaaday in sahayda ay dhanka dhulka ku gudbistaan.